Dzese nhau dzeIOS 11.1 muvhidhiyo: 3D Kubata, Kuwanika, Emoji uye nezvimwe | IPhone nhau
Dzese nhau dzeIOS 11.1 muvhidhiyo: 3D Kubata, Kuwanika, Emoji uye nezvimwe
Apple inoenderera mberi nekukwenenzvera vhezheni yayo huru inotevera mushure mekumisikidzwa zhizha rino reIOS 11. Iyo inotevera iOS 11.1 yave kuda kugadzirira, uye ichimirira kutsigirwa kwekuuya kweApple Pay Cash kuti ikwanise kubhadhara pakati pevanhu kuburikidza neMessage, Tinogona kutaura kuti chinenge zvese izvo ino vhezheni itsva ichabatanidza yatove mune yazvino Beta 3.
Kudzoka kwe3D Kubata kwe multitasking uye kugona kuchinjika pakati pekushandisa, kudzoka kweReachability nenzvimbo yekuzivisa mukati mekusvikira kubva pakati pechidzitiro, iyo emoji nyowani iyo Apple yakaisa mukhibhodi yayo, mashandiro matsva mumagwaro anoburitsa anotipa emoji yakawanda kupfuura nakare ... shanduko dzinonakidza dzatichakuratidza pazasi uye muvhidhiyo inofambidzana chinyorwa.
1 Emoji nyowani
2 Zviito zviviri zvinonyanya kudiwa: Multitasking uye Reachability
Yaive imwe yeanonyanya kutaurwa manyorerwo eBeta yekutanga yeIOS 11.1 (isu tatova pane yechitatu), uye kunyangwe kune vakawanda isiri yakakosha, kure nazvo, hatigone kuramba kuti emoji yakagara kwenguva refu kuzogara uye kuti pese patinovashandisa zvakanyanya. Zviso nyowani kuti zvikwanise kutaura zvese zvinouya mupfungwa, senge emoji inotaura kutuka kana iyo inorutsa, zombie isingagone kupotsa., varoyi, draculae emarudzi ese uye vanhukadzi, kumeso uko hapana chekuvhara ... runyorwa rurefu rwemoji nyowani (anopfuura zana) izvo zvinoita kuti zvisave nyore kuwana iyo yatiri kutsvaga.
Ndokusaka Apple yakawedzera mashandiro matsva kune yayo yekufungidzira keyboard. Kana isati yatipa emoji apo isu takanyora chimwe chinhu chinogona kuratidzwa kuburikidza nekasekesa kadiki katuni, ikozvino inotipa dzinoverengeka (kusvika kumatatu) kuti tikwanise kusarudza iyo inoita senge yakakodzera. Kunyangwe tikanyora sairini inotipa isu kuti tisarudze pakati pechakanaka chisikwa kana yechinyakare sairini yemapurisa.
Zviito zviviri zvinonyanya kudiwa: Multitasking uye Reachability
Iwo aive maviri mabasa akaraswa nevashandisi vazhinji uye havana kunzwisisa kuti sei vakabviswa neApple nekutanga kweIOS 11. Kubaya pamucheto wedivi rechidzitiro kuvhura multitasking kana kutsvaira kuti ushandure pakati pemapurogiramu chinhu chakazojairirwa nekubviswa pasina ziviso. Izvozvowo zvakaitika nekusvika kunzvimbo yekuzivisa kubva pakati pekona paunenge uchishandisa Reachability. Chii chaive chiri kushandisa kudzikisa chidzitiro kana iwe waifanira kuramba uchitsvedza kubva kumusoro? Huye, ese ari maviri mashandiro atove aripo muIOS 11 Beta 3 uye achanyatso kuve mune yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Dzese nhau dzeIOS 11.1 muvhidhiyo: 3D Kubata, Kuwanika, Emoji uye nezvimwe
Zvakadini neBATTERY? Nekuti kubva pandakagadzirisa ku ios11 ndizvo zvandinoda zvakanyanya eh
Chaizvoizvo neiyo 7 Plus ini handina kuona matambudziko neBattery, saka ini handigone kusimbisa kana iwo awakaona kuti akadonha achazogadziriswa.
Ndanga ndichishandisa iOS11 kubvira yekutanga beta yeruzhinji, uye INI handina kumbove nematambudziko nebhatiri ...
Junior vargas akadaro
Ini ndinogona kuisa iyi beta uye kudzikira gare gare? Ndine iPhone 6 ine 10.0.3
Pindura Junior Vargas
Apple inosimbisa kuti yakatogadzirisa kukosha kwakakosha muiyo WPA2 protocol
Apple inoburitsa beta 3 yeIOS 11.1 uye watchOS 4.1